काठमाडौँ । मृत्युका धेरै कारण छन् । केहीबेर अघिसम्म स्वस्थ भनिएको मानिस केहीबेर पछी अकास्मात मरेको खबर पाईन्छ भने कस्तो होला ?
त्यस्तै नेपालमै पनि केहि समय अघि चर्चित नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ का छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातकै कारण अकास्मात मृत्यु भयो । यी दुवै चर्चित घटनाले आम मानिसहरुमा हृदयघातबाट हुनसक्ने मृत्युको भय सृजना भएको छ । यस्तो हर्ट-अट्याक महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी हुने गरेको छ ।
साइलेन्ट हर्ट-अट्याकका ५ लक्षणहरु:
५. पटक-पटक स्वास फुल्ने , स्वास प्रस्वासमा समस्या हुनु
साइलेन्ट हर्ट-अट्याकबाट बच्ने ५ उपायहरु: